Nanoka-baravarana etsy amin’ny Tana Waterfront Ambodivona, nanomboka androany 18 novambra 2019 ny toeram-pisakafoana voalohan’ny vondrona KFC. Ny fisokafan’ny toerana tahaka itony eto amintsika dia hitondra fitomboana eo amin’ny lafiny toe-karena, ary hiteraka asa ho an’ny mponina, hoy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, nandritra ny lanonam-panokafana ity toeram-pisakafoana ity. Hisy toeram-pivarotana faharoa hisokatra eto Antananarivo Renivohitra amin’ny volana aprily 2020, ary hiitatra any amin'ny faritany aorian’izay, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny vondrona KFC. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 13 novembre 2019 15:07
Valanjavaboary Tsimbazaza: Ahitana karazam-biby 61 sy zavamaniry 79 karazana
« Vitrine de Madagascar » na saha lehibe mitahiry zavamaniry sy biby maro karazana maneho ny haren’i Madagasikara ny valanjavaboary na Parc Botanique et Zoologique - Tsimbazaza. 61 ny karazam-biby misy ao, ka vorona ny 18 karazana, biby mandady ny 18, ragidro ny 17 ary 8 karazam-biby mampinono. Misy 79 karazana kosa ny zavamaniry.
Tontosa ny alahady 10 novambra 2019 ny sorona masina lehibe nitsofan-drano ny fahavitan’ny fanitarana ny Katedraly Maria Manjaka, Diosezy Morondava eto Namahora. Mahazaka mpiangona miisa 3 000 ity trano fiangonana ity taorian’ny asa fanitarana. Nitarika ny fanompoam-pivavahana ny Kardinaly Mgr Tsarahazana Désiré, teo anatrehan'ny Solontenan’ny Papa Ray Masina, Mgr Paollo Rocco Gualtieri sy ireo Arseveka sy Eveka maro avy any amin'ny Faritra hafa eto Madagasikara. Teo ihany koa ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, sy ireo mpikambana tao amin'ny governemanta vitsivitsy, ary ireo mpiara-dia aminy. (Jereo Sary Tohiny)
Hatao ny Alahady 10 novambra izao ny fitokanana ny Katedraly vaovao aty Namahora Morondava. Hitarika ny lamesa ho amin’izany ny Kardinaly Désiré Tsarahazana sy Mgr Paolo Gualteri solontenan’i Papa Ray Masina, hotronin’ireo Eveka maro eto Madagasikara.
Niomana i Madagasikara hifaninana amin’ny Robotex Armenia 2019 : International Robotics Contest, fifaninanana iraisam-pirenena amin’ny robot. Tokony nanainga omaly hariva niazo an’i Arménie ny ekipa malagasy « Girls Robotika Madagascar » nahitana an’i Ravololonantenaina Misa, Landy Tiana, Razanakoto Lorie ary Rasamimanana Mickaella, izay saika hiatrika ny fanamby « Robotex Armenia 2019 ». Tsy tanteraka anefa izany, hoy ny STEM4Good namolavola azy ireo, noho ny olana ara-bola, na teo aza ireo malalatanana vitsivitsy. Tsy hijanona eo ny tantaran'izy dimy vavy, ary tsy ho very maina ny ezaka lehibe natao, ny fiaretan-tory sy ny fitotototoana hitady mpanohana efa ho roa volana izay, fa hatao izay hahatafiditra azy ireo amin'ny fanamby Robotex manaraka, hoy ny STEM4Good. (Jereo Sary Tohiny)
Hotanterahina ny zoma 8 novambra 2019 ny fanitrihana ny nofomangatsiakan’i Andriamilisoananahary Jacques Florian, na Jacques Nanahary, any amin’ny fasan-drazany any Mahitsy, Distrikan’Ambohidratrimo. Hifamotoana eny Soavimasoandro, misy ny trano fonenan’i Jacques Nanahary, ny mpanakanto araka ny fanantenana nataon’ny OMDA (Ofisy malagasy misahana ny zon’ny mpamorona) hanao veloma farany azy. Nindaosin’ny fahafatesana ny marainan’ny alarobia 6 novambra 2019 teo amin’ny 78 taona i Jacques Nanahary. Dimy lahy tamin’ireo folo mianadahy iray tampo, izy ireo no tao amin’ny tarika Ny Nanahary fa ny efatra dia i Mamy, Efraïma, Pierre Railala ary Jacques izay samy efa nodimandry avokoa, no tena nanohy niaraka tamin-dry Rakotondranoro Marcel, ity farany izay efa nodimandry ihany koa. (Jereo Sary Tohiny)
Henin-kaja tanteraka ny nandraisan'Antsirabe farany ny nofo mangatsiakan'i Dadah tao amin'ny tarika Mahaleo androany. Hipoka ny kianjan'ny kolontsaina, nanoloana ny Tranom-pokonolona. Tokony ho tamin'ny 2ora no nanomboka tonga ny vahoaka sy ny mpanakanto, ary nanomboka ny fanentanana ara-javakanto niventesana ny hiran'i Dadah. Tokony tamin'ny 4 ora latsaka no nigadona ny razany, ary nisy ny lahateny fohy nentin'ny solontenan'ny sampandraharahan'ny kolontsaina, ary i Bekoto (Mahaleo) no nitondra fisaorana ho an'ny mponin'Antsirabe ka nanambarany fa teto izy ireo no niainga ary dia eto ihany koa no hody. Rehefa lasa ny razana halevina any Betafo dia mbola nitohy kosa ny hirahira sy kalokalo nataon'ireo mpanakanton'Antsirabe ho fahatsiarovana an'i Dadah. (Jereo Sary Tohiny)
Jean Fredy sy Dede Fenerive no nisantarana ny fanorenana ny tsangambato ho an’ireo mpanakanto zanaky ny Faritra Analanjirofo nitondra avo ny kolontsaina. Tao amin’ny Tarika MIAREMA ireto mpanakanto ireo. Namoaka hira tao amin’ny Kaiamba nalaza tamin'ny taona 70-80. Vita ny sabotsy 2 novambra 2019 taty Fenoarivo-Atsinanana ny lahojoro sy fametrahana vato fototra mikasika izany, tarihin’ny Talem-paritry ny serasera sy kolontsaina. Haharitra roa volana ny asa. Niara-niasa tamin’ny talem-paritra Ndiamahazo Mickaelys tamin’ny fanorenana izao tsangambato roa aty Fenoarivo-Atsinanana izao ny solombavambahoaka Mohamad Amady sy Soanera Gabrielle mpandraharaha zanaky ny faritra Analanjirofo monina ao Toamasina. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 06 novembre 2019 12:14
Mpanakanto: Nodimandry androany teo amin’ny faha-78 taonany i Jacques Nanahary
Nindaosin’ny fahafatesana androany alarobia 6 novambra 2019, maraina, i Andriamilisoananahary Jacques Florient, fantatra tamin’ny anarana maha mpanakanto azy hoe : Jacques Nanahary. Folo mianadahy izy ireo no iray tampo, dimy lahy tamin’ireo samy tao amin’ny tarika Ny Nanahary, fa ny efatra dia i Mamy, Efraïma, Pierre Railala ary Jacques, izay samy efa nodimandry avokoa, no tena nanohy niaraka tamin-dry Rakotondranoro Marcel, fa ny faralahy izay hany sisa velona, efa nijanona tsy nanohy ny sehatry ny fihirana. Teraka tamin’ny 26 jona 1941 i Jacques Nanahary, 78 taona izy izao nodimandry izao. Eny an-tranony eny Soavimasoandro Antananarivo ny nofo mangatsiakany. Ho fantatra amin’ny fotoana manaraka ny fandaharam-potoana ny amin’ny fanaovam-beloma sy fandevenana azy. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 06 novembre 2019 08:56
Sary nindramina sy Gasypatriote
06 novambra 1995 - 06 novambra 2019: Mijanona ho mistery ny antony nahamay ny Rovan'i Manjakamiadana
May kila hotohoton’ny afo ny Rovan'i Manjakamiadana ny harivan’ny 06 novambra 1995. 24 taona aty aoriana, rindrim-bato no hany tazana, taorian’ny asa fanarenana natombok’i Marc Ravalomanana tamin’ny 2006. Hatreto, mijanona ho mistery ny antony nahamay ny Rovan'i Manjakamiadana. Nanao vava asa teny ny filoha Andry Rajoelina iray volana taorian’ny nandraisany ny fitondrana, ary mikasa ny hamita ny fanarenana ny ao Anatirova mialohan’ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara. (Jereo Sary Tohiny)